के ‘सेक्स’ को लत रोग हो ?
प्रकासित मिति : २०७८ जेष्ठ २८, शुक्रबार ००:०७ प्रकासित समय : ००:०७
काठमाडौं, अमेरिकाको एटलान्टा क्षेत्रमा भएको स्पा सेन्टरमा भएको गोलीबारीपछि एक युवक पक्राउ परे । युवक पक्राउ परेपछि ‘सेक्स एडिक्शन’ को विषय पुनः चर्चामा आएको छ । उक्त युवकले गोलीबारीपछि आफूलाई स्पा सेन्टर देख्दा यौन इच्छा तीव्र हुने भएकाले स्पाप्रति घृणा जागेर गोलीबारी गरेको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् ।
उनको तीव्र यौन इच्छा कै कारण उनलाई परिवारले घरबाट समेत निकालेका थिए । उनी घटौँसम्म ‘पोर्न फिल्म’ हेर्ने गरेको परिवारको भनाई उद्धृत गर्दै अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
यो काण्डपछि विश्वभर नै ‘सेक्स’ को लत रोग हो ? भन्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । तर, विशेषज्ञ र मनोवैज्ञानिक चिकित्सकहरुले यौन इच्छा तीव्र हुने कारणले हिंसा हुन्छ भन्ने कुरा साँचो नभएको बताएका छन् ।
‘सेक्स’ लतको लक्णः
मानिसका अन्य लत जस्तै सेक्सको लत पनि एक हो । यसले मानव मष्तिष्कमा हाबी भएको हुन्छ । स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार स्वास्थ्यकर जीवनका लागि यौन पनि आवश्यक हुन्छ । तर आवश्यकताभन्दा बढी यसमा चासो दिनु शारीरिक र मानसिक स्वास्थयका लागि बेफाइदा हुन्छ ।
यौनको लत लागेका व्यक्तिहरु जुनसुकै समयमा पनि यौनकै बारेमा सोचेर बस्ने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु कुनै न कुनै तरिकाले यौनजन्य क्रियाकलापमा नै लागिरहन्छन् । यति मात्र होइन यौनकै लागि आफ्नो व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवनमा समेत क्षति पुर्याउँछन् ।
जो व्यक्तिमा यौनको लत लागेका व्यक्तिहरु दुईभन्दा बढी सम्बन्धमा रहने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु आफ्ना पार्टनरसँग कुनै पनि भावनात्मक रुपमा लगाव राख्दैनन् । कोही सेक्सको लत लागेका व्यक्तिहरु नियमित रुपमा व्यवसायिक रुपमा यौन कार्यमा संलग्नहरुकोमा जाने गर्छन् । साथै, साइबर सेक्स र पोर्नोग्राफीमा पनि लिप्त रहनेगर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरु असुरक्षित सम्बन्धको खतरा पनि उठाउने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिहरुलाई भावनात्म सन्तुष्टि मिल्दैन । र, यौनसम्बन्धपछि अपराधबोध गर्छन् ।
यो लत लाग्नुको पछाडि कुनै पनि वैज्ञानिक कारण भने छैन । तर, थुप्रै प्रकारका मानसिक स्थितीहरु भने यो लत लाग्नुमा जिम्मेवार हुन्छन् । जस्तै, डिप्रेशन, एक्लोपन जस्ता कुराहरुले यौनजन्य बानीव्यवहार गर्नतर्फ उद्यत रहन्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको इन्टरनेशनल स्ट्यास्टिकल अफ डिजिज (ICD10) र अमेरिकी साइकेट्रिस्ट एसोसिएशनले यौनजन्य बानीव्यवहारलाई कुनै पनि रोग नभएको बताएको छ । हरेक व्यक्तिको फरक फरक सेक्स ड्राइभ हुन्छ । सेक्सको लत लागेका व्यक्तिहरुको बारेमा सन् २०१९ मे विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा यस्ता व्यक्तिहरुले कयौँपटक यौनसम्बन्ध राख्दा पनि सन्तुष्ट नहुने बताइएको थियो ।
सन् २०२२ मा आउने विश्व स्वास्थ्य संगठनको इन्टरनेशनल स्ट्यास्टिकल क्लासिफिकेशन अफ डिजिज (ICD11)मा यस विषयको नयाँ व्याख्या गरिएको छ ।
ICD11 मा भनिएको छ, ‘कम्पलसिभ सेक्सुअल’ बानी एक प्रकारको मानसिक असन्तुलन हो । जुन एकातर्फ मात्रै चल्छ । यसमा व्यक्तिले आफ्नो यौन इच्छालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यो बानी ६ महिनाभन्दा बढी भएमा यसको असर व्यक्तिको निजी जीवन, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक र व्यवसायिक क्षेत्रसम्म पर्न जान्छ ।’